Ihe Ọhụrụ Ga Na-adịzi n’Ọmụmụ Ihe Etiti Izu Anyị
GỤỌ NKE Abua Abui Acholi Afrikaans Aja Albanian Alur Amharic Arabic Armenian Assamese Ateso Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Douala Drehu Dutch Edo Efik English Esan Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Gokana Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Laotian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mende Mingrelian Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Malite n’ọnwa Jenụwarị afọ 2018, n’ọmụmụ ihe etiti izu anyị, a ga-enwe ihe ụfọdụ si ná Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ Bekee nke a na-amụ amụ (nwtsty), anyị ga-eji na-amụ ihe. Ihe ndị ahụ ga-abụ foto, vidio na ihe ndị ọzọ e ji kọwaa amaokwu Baịbụl ụfọdụ. Ọ bụrụgodị na ọ dịbeghị n’asụsụ unu, o doro anya na ihe ndị ahụ ga-abara unu ezigbo uru mgbe unu na-akwadebe ọmụmụ ihe. Anyị nwere olileanya na ihe ọhụrụ a ga-enye aka mee ka unu bịarukwuo nna anyị na-ahụ n’anya bụ́ Jehova nso.
IHE ỤFỌDỤ A KỌWARA
Ihe ndị a kọwara ga-enyere anyị aka ịmatakwu gbasara omenala, asụsụ na otú ebe ndị a kọrọ akụkọ ha n’ebe anyị na-agụ na Baịbụl dị.
Owu oriọna na-achọ ịnyụ anyụ: Ihe e ji amụnye ọkụ n’ụlọ n’oge ochie na-abụkarị ihe ọkụ e ji ụrọ kpụọ agbanyere mmanụ oliv n’ime ya. Ọ bụ ogho e tinyere n’ihe ọkụ ahụ na-amịta mmanụ na-eme ka ọkụ ahụ na-enwu. Okwu Grik bụ́ “owu oriọna na-achọ ịnyụ anyụ” nwere ike ịpụta owu na-akwụ anwụrụ ọkụ n’ihi na ọ nyụchabeghị ma ọ bụkwanụ na ọ nyụọla. Amụma e buru n’Aịzaya 42:3 gosiri otú Jizọs ga-esi metere ndị mmadụ ebere; ọ gaghị emenyụ ọkụ na-achọ ịnyụ anyụ, ya bụ, olileanya ikpeazụ nke ndị a na-emegbu emegbu.
N’ezie: E si n’okwu Hibru bụ́ ämānʹ, nke pụtara “ka ọ dị otú ahụ,” nweta okwu Grik bụ́ ämēnʹ. Jizọs na-ejikarị okwu a ebido okwu ya iji gosi na ihe ọ na-ekwu, nkwa ọ na-ekwe ma ọ bụ amụma ọ na-ebu bụ eziokwu nakwa na e kwesịrị ịtụkwasị ihe ahụ o kwuru obi. E kwuru na otú Jizọs si kwuo “n’ezie” ma ọ bụ amen pụrụ iche na Baịbụl ma ọ bụ n’akwụkwọ okpukpe ndị ọzọ. N’ebe niile o kwuru amen ugboro abụọ (a·menʹ a·menʹ), dị ka ọ dị n’ebe niile n’Oziọma Jọn, a sụgharịrị ya “n’ezie, n’ezie.”—Jọn 1:51.
IHE E JI KỌWAA IHE ỤFỌDỤ NA BAỊBỤL
Ihe dị ebe a bụ foto, ihe ndị e sere ese, vidio na katuun na-enweghị ụda e ji na-akọwakwu ihe ndị dị na Baịbụl.
Betfeji, Ugwu Oliv na Jeruselem
Ihe a bụ obere vidio gosiri ụzọ e si abanye n’ebe ọwụwa anyanwụ Jeruselem. Ụzọ ahụ si n’obodo Baịbụl bụ́ Betfeji nke e chere na ọ bụ ya bụ et-Tọr ugbu a, gawa n’otu n’ime ebe ndị kacha elu n’ugwu Oliv. Betani dị n’ebe Ọwụwa Anyanwụ Betfeji, ná mkpọda ebe ọwụwa anyanwụ nke ugwu Oliv. Mgbe ọ bụla Jizọs gara Jeruselem, ya na ndị na-eso ụzọ na-ehikarị na Betani. Taa, e weere ya na ọ bụ Betani bụ obodo ahụ aha arabik ya bụ el-ʽAzariyeh (El ʽEizariya), nke pụtara “Obodo Lazarọs.” O doro anya na ọ bụ n’ụlọ Mata, Meri na Lazarọs ka Jizọs na-anọ. (Mat. 21:17; Mak 11:11; Luk 21:37; Jọn 11:1) O nwere ike ịbụ na Jizọs na-esikarị n’ụzọ a agafe mgbe ọ bụla o si n’ụlọ ha gawa Jeruselem. N’abalị itoolu n’ọnwa Naịsan afọ 33 O.N.K., mgbe Jizọs gbaara ịnyịnya ibu si n’Ugwu Oliv gawa Jeruselem, o nwekwara ike ịbụ na o si Betfeji, soro ụzọ a gawara Jeruselem.
Ụzọ si Betani gawa Betfeji
Ugwu Ụlọ Nsọ
Ntu A Kpọnyere n’Ọkpụkpụ Ikiri Ụkwụ
Ihe a bụ foto ọkpụkpụ ikiri ụkwụ mmadụ a kpọnyere ntu ígwè dị ihe dị ka inch anọ na ọkara n’ogologo. Ọ bụ n’afọ 1968 ka e gwupụtara ọkpụkpụ a, n’ebe ugwu Jeruselem. Ọ ga-abụ n’oge ndị Rom na-achị ka a kpọnyere ntụ n’ọkpụkpụ a. Ọkpụkpụ a na-egosi na ọ ga-abụrịrị na ndị oge ahụ na-eji ntu akpọgide ndị a mara ikpe ọnwụ n’osisi. O nwekwara ike ịbụ ụdị ntu a ka ndị agha Rom ji kpọgide Jizọs n’osisi. A hụrụ ọkpụkpụ a n’otu igbe e ji nkume rụọ. A na-ejikarị igbe nkume a etinye ọkpụkpụ ndị nwụrụ anwụ ma ahụ́ ha rechaa, ọkpụkpụ ha a kpọọkwa nkụ. Ihe a na-egosi na e nwere ike ili onye a kpọgidere n’osisi eli.—Mat. 27:35.